Fasaxyada xagaaga ayaa imanaya waana inaad ballansataa. Huteelkee la dooranayaa? | Ragga Stylish
Paco Maria Garcia | | La cusboonaysiiyay 30/05/2017 18:51 | Waqtiyada firaaqada
Waxaa la caddeeyay in marka ciidaha la gaaro, anaga oo Isbaanish ah safarkayagu waa badanayaa. Dhab ahaan, cudur daar kasta wuxuu ansax u yahay qorsheynta ka baxsan guriga, dhammaadka usbuuca, dhammaadka usbuuca, dhowr fasax, iwm.
Waqtiga ayaa la gaadhay dooro hudheelka saxda ah. Waxaa jira dhammaan noocyada, qiimaha, astaamaha, iwm. Sidee loo xushaa midka na xiiseynaya?
1 Hoteelka ugufiican ciidaha
2 Isbarbardhigayaasha hudheelka
3 Nooca hoteelka
Hoteelka ugufiican ciidaha
Markii hore, si aad u doorato hudheelka habboon, waa inaad tixgelisaa adeegyada ay bixiso, meesha ay ku taallo, tayada la aqoonsan yahay iyo qiimaha qolalkooda.
Haddii aan tagno la safrida caruurtaWaxaa ugufiican in la helo hudheel madadaalo iyo nashaadaad u fidiya kuwa yaryar. Waa la madadaalin doonaa, way raaxaysan doonaan, kuwa waawaynna sidoo kale waxay heli doonaan waqti dheeri ah iyagoon la sugin, hawshaasna waxay u daayaan kormeerayaasha.
Hadday tahay fasaxyadu waa lammaane ahaan ama raadinaya booska jaceylka, waxaa jira hudheelo badan oo leh soo jiidasho gaar ah, duugista, spa iyo faahfaahin kale. Dhalo cava ah oo ku jirta qolka markii la yimaado, quraacda isla qolka, iwm, waa waxyaabo yaryar oo qolka ka buuxin doona soo jiidasho.
Maalmahan iyo natiijada tiknoolajiyada, waxaa jira boggag badan oo isbarbardhigayaal ah, kuwaas oo noo oggolaada inaan dooranno qaybta, goobta aasaaska, heerarka qiimaha, noocyada hoyga, arag faallooyinka socdaalka kale, iwm.
Nidaamka ugu waxtarka badan ayaa ah hel hudheelka sida ugu habboon baahiyaheena iyo dookhyadayada, ka dibna isbarbar dhig qiimaha ugu fiican natiijooyinka raadinta. Haysashada shuruudaha ugu horreeya ee xulashada kii hore ayaa naga qaadi doona waxa aan raadineyno.
Waa inuu lahaadaa ka taxaddar haddii aad u safarto dibadda. Wadamada Yurub, qaybta xaqiiqdii waxay u dhigantaa runta. Laakiin haddii aan u safrayno qaaradaha kale, wax baa is beddelaya. Talo fiican ayaa ah xulo hudheel ugu yaraan afar xiddig leh.
Ha iloobin inaad wax aqriso faallooyinka safarka kale, taas oo abuuri karta kalsooni aad uga weyn tan shirkadda hoteelka.
Ilaha sawirka: Hotel Perú News / Activa Noticias
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Huteelkee ayaa loo doortaa ciidaha?
Sida loo maareeyo cilaaqaadka dhibaatooyinka
Shandad noocee ah ayaad ubaahantahay xagaagan?